Manager/ Asst. Manager for Petrol Station at Moon Sun Trading Co.,Ltd
• Establishingagood reputation by providing the best service, standard quality and quantity to achieve applicable legal and statutory interested parties and / or products requirements.
• Builtahighly competent, efficient and discipline workforce through quality training programs
• Aim for customer satisfaction to reach high reputation and merit customer trust.
• Implementing & continual improving an effective Quality Management System and recheck the set objectives periodically
MOON SUN Trading Co.,Ltdအား 2012 ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားမှကိုယ်တိုင်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချသောသောစက်သုံးဆီအမျိုးအစားများမှာ Octane 92 Ron, Octane 95 Ron, Octane 97Ron,Diesel, Premium Diesel တို့ဖြစ်ကြသည်။၂၀၁၅ခုနှစ်တွင် ISO 9001: 2015 ကိုရရှိခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ စက်သုံးဆီအမျိုးအစားများကို (Retail Shops)လက်လီဖြန့်ဖြူးရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်သုံးဆီတင်ပို့၍ လက်ကားရောင်းချပေးခြင်းလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ အရည်အသွေးပြည့်မီသောဒီဇယ်၊ အဆင့်မြင့် ဒီဇယ်များအား လုပ်ငန်းခွင်တွင် အဆင်ပြေစွာအသုံးပြုနိုင်ရေးအတွက် အချိန်အတွယ် (လီတာ၊ ဂါလန်) ပြည့်ဝစွာပို့ဆောင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၊ အချိန်တိုအတွင်းအရောက်ပို့စနစ် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ဈေးနှုန်းမှန်ကန်ခြင်း၊ မွန်းဆန်းဆီဆိုင်မှ တစ်ဂါလန်လျှင် ၄.၅၄၆ လီတာအချိန်အတွယ်ဖြင့်ရောင်းချကြောင်းအာမခံနိုင်ခြင်း၊ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီစက်သုံးဆီအရောင်းစနစ် အသုံးပြုထားသောကြောင့် အချိန်အတွယ်နစ်နာမှု မရှိနိုင်ခြင်းစသည့် ၀န်ဆောင်မှုများကို ပြုလုပ်ပေးပါသည်။
မွန်းဆန်းစက်သုံးဆီဆိုင်တွင် ပစ္စည်းမှန်၊ ဈေးနှုန်းမှန်၊ အရည်အသွေးမှန်၊ တိကျမှန်ကန်သော ဆီထွက်နှုန်းရရှိနိုင်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီကွန်ပြူတာစနစ် အသုံးပြု၍ ဆီရောင်းချသောစနစ်ကိုတပ်ဆင် အသုံးပြုထားပါသည်။
ဖွင့်လှစ်ပြီးဖြစ်သော MOON SUN ENERGY retail shop ဆိုင်ခွဲ (၉)ဆိုင်
၁။ အမှတ် (၁၆၃/၁)၊ သုနန္ဒာလမ်းနှင့် သုဓမ္မာလမ်းထောင့်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ရန်ကုန်။
၂။ အမှတ်(၄)လမ်းမကြီး၊ သာဓုကန်စက်မှုဇုန်အနီး၊ ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
၃။ အမှတ်(၁/၇၁၃၊ ၂/၇၁၃)၊ ၂၁ရပ်ကွက်၊ တောင်ဒဂုံစက်မှုဇုန်အနီး၊ ပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း၊ ရန်ကုန်။
၄။ နန်းသြကျေးရွာ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း၊ မိုင်တိုင်(၂၆၀)လမ်းမပေါ်၊ ဥတ္တရခရိုင်၊ဇေယျသီရိ မြို့နယ်၊ နေပြည်တော်။
၅။ အမှတ်(၄၅)၊ ဘူတာရုံလမ်း (ခ) လမ်းသစ်လမ်း၊ နံ့သာကုန်းရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။
၇။ အမှတ်(၁၅)၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီး၊ မြစိမ်းရောင်အိမ်ရာ၊ ဒဂုံဧရာအဝေးပြေးရှေ့၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
၈။ ကျွဲတပ်ဆုံကျေးရွာ၊ မိတ္ထီလာ - တောင်ကြီးလမ်းမ၊သာစည်မြို့နယ်။
၉။ အမှတ် (၁၉၄၇/က)၊ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီး၊ ဘုရင့်နောင်တံတားအဆင်း၊ FMI City အနီး၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်။
မွန်းဆန်းဆီဆိုင် (ဆိုင်ခွဲ ၁) (မြောက်ဥက္ကလာ)
မွန်းဆန်းဆီဆိုင် ( ဆိုင်ခွဲ ၂) ( ရွှေပြည်သာ)
မွန်းဆန်းဆီဆိုင် (ဆိုင်ခွဲ ၃) ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း
မွန်းဆန်းဆီဆိုင် (ဆိုင်ခွဲ၎) နေပြည်တော်
မွန်းဆန်းဆီဆိုင် (ဆိုင်ခွဲ၅) အင်းစိန်မြို့နယ်
မွန်းဆန်းဆီဆိုင် (ဆိုင်ခွဲ ၆) (မိတ္ထီလာ)
မွန်းဆန်းဆီဆိုင် (ဆိုင်ခွဲ၇) (လှိုင်သာယာမြို့နယ်)
မွန်းဆန်းဆီဆိုင် (ဆိုင်ခွဲ၈) (သာစည်)
မွန်းဆန်းဆီဆိုင် (ဆိုင်ခွဲ၉) (Excellent Apex)
North Okkalapa, Yangon 15 February 2020
Job Reference: MSHR 0013
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်တစ်ဆိုင်လုံး စီမံခန့်ခွဲအုပ်ချုပ်မှုနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို အောင်မြင်အောင် စီမံခန့်ခွဲဆောင်ရွက်ရမည်။
စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်၏ရောင်းအား ပုံမှန်ထိန်းသိမ်းထားပြီး ရောင်းအားတိုးမြှင့်ရေးအတွက် ဈေးကွက် ထိုးဖောက်ဆောင်ရွက်ရမည်။
မိမိအထက်ကုမ္ပဏီဌာနချုပ်နှင့် ဈေးကွက်ဖောက်သည်အကြား Customer များထံသို့ ကောင်းမွန်သည့် ၀န်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရေးအတွက် လိုအပ်သောအကြံဥာဏ်များကို ရောင်းအားတိုးတက်စေရန် အကြံပြု ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။
တက္ကသိုလ်တခုခုမှဘွဲ့ရဖြစ်ပြီး Management နှင့်ပတ်သက်သည့် Certificate (or) Diploma ရှိရပါမည်၊၊
လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃)နှစ်ရှိပြီး အသက်(၅၀)နှစ်အောက်ဖြစ်ရမည်။
တာဝန်ကျသည့်မည်သည့်ဆီဆိုင်မဆို နေ့/ညအလိုက်တာဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ရမည်၊၊
Do you have experiences in related field?:
Can you travel to anywhere if require?:
Can you join immediately?:
Operations Senior Supervisor Padauk Shwe War Port & Terminal Co., Ltd
Safety Officer Padauk Shwe War Port & Terminal Co., Ltd
Regional Sales Manager AA Medical
Service Technician (Gas Engine) DKSH Myanmar
Station Supervisor Male (3) Posts Moon Sun Trading Co.,Ltd
Mandalay 15 February 2020
Manager/Asst; Manager Moon Sun Trading Co.,Ltd